I-Naturesque Farm Villa ekhethekileyo kuwe - I-Airbnb
I-Naturesque Farm Villa ekhethekileyo kuwe
Ifama sinombuki zindwendwe onguJoshin
Ifama kaJohny Moose Backwater iselunxwemeni lomlambo i-meenachil ngaphakathi kwemida yedolophana yase-Aymanam eyenziwa yaduma yi-Arundhati Roy 's Booker Award ephumelele' U Thixo Wezinto Ezincinci '. Le ndlu ingama-acre ayi-12 iphethwe kwaye iqhutywa nguMnumzana Johny Moose kunye nentsapho kwaye sele iyikhaya losapho iminyaka engaphezu kwe-100. Zonke iindwendwe zikhathalelwe yintsapho, kunye nokutya kwaseKerala okuvela ekhitshini lethu lasekhaya. Ukuzola nokuzola, indawo efanelekileyo yokwenza "into" eninzi. Yiba nje!
Ifama kaJohny Moose Backwater yeyona ibalulekileyo kwifama yeentlanzi esebenzayo, eyakhiwe ngaphezu kweminyaka eyi-20. Indawo yokuhlala yeendwendwe, 'i-Ullasakottaram' okanye njengoko siyibiza 'ngobukhosi be-Laziness', ejonge ichibi lethu labucala eliziihektare eziyi-5, lakhiwa emva kokufunwa ngabahlobo nentsapho. Ngoku siyivulele ihlabathi elingaphandle njengendlela eyongezelelweyo yengeniso kwifama kunye nethuba lokudibana nabantu abatsha. Ngoko ukubukeka kwendawo kunye nomoya kungokwemvelo kwaye kuyasebenziseka, kulungele ifama kungekhona i-resort yobunewunewu. Kulula kodwa intle!
I-Aymanam yinxalenye yenkqubo ye-Kumarakom wetland kwaye inxalenye enkulu yale lali igqunywe ziintsimi zootata kunye nomlambo i-meenachil ogqitha phakathi. Kukho iitempile ezindala kunye neecawa onokuzijonga. Ii-parlours ezimbalwa ezintle ukuba ufuna ukuva ukutya kwasekuhlaleni kunye notywala, kanye ngendlela abahlali abenza ngayo. Ichibi iVembanad liyi-8 kms ukuba uhamba ngomlambo okanye uhamba ngebhayisekile ngakumlambo kunye neendawo zootata. Aba bahlali ngabantu abanobubele ibe baya kuhlala bebulisa ngokumomotheka. Kukho neentaka ezininzi
Umbuki zindwendwe ngu- Joshin
Intsapho ihlala efama ibe kuza kusoloko kukho umntu oza kunceda okanye akhokele iindwendwe zethu.